Ntuziaka maka ịhazi ihe ngosi na ntanetị na 127th Canton Fair-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ntuziaka maka ịhazi ihe ngosi ntanetị na 127th Canton Fair
Oge: 2020-08-27 Hits: 35
1. Kpọmkwem oge? Ogologo oge ole ka oge ngosi ahụ dị?
Site na June 15-24, 2020, ihe ngosi ga-adịgide ụbọchị 10.
2. The akporo nke online exhibitors?
Ngosi Mbupụ: Ndị na-ekpughe ihe dịka ụlọ ọrụ 25,000 nke ụlọ ntu nke 127th Canton Fair mere ndokwa.
Ihe Mbubata Bubata: Ndị na-eme ihe ngosi bụ ụlọ ndozi nke mba ofesi na ụlọ ọrụ mejupụtara ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ ntu maka Ihe ngosi 127th Canton. A na-eme atụmatụ na e nwere ihe dị ka ụlọ ọrụ 400 si ihe dị ka mba na mpaghara 30.
Iji hụ na ogo nke Canton Fair emere na ntanetị maka oge izizi na ịga n'ihu na iru eru chọrọ nke ihe ngosi anụ ahụ na-adịghị n'ịntanetị maka ndị na-egosipụta ihe ngosi, ụlọ ọrụ ndị na-abụghị ndị dị n'elu nwere ike isonye na mmemme nke usoro-e-commerce nke ndị ọzọ. "Synchronous Canton Fair, Global Business Ohere"
3. Gịnị bụ ndokwa a kapịrị ọnụ nke isiokwu ngosi ahụ?
E kewara ihe ngosi mbupụ ahụ na mpaghara ngosi 50 mebere ụzọ 16 nke ngwaahịa, ya bụ: ngwa elektrọnik na ngwa ụlọ, ọkụ, ụgbọ ala na ngwa, akụrụngwa ngwaike, akụrụngwa, ihe ụlọ, ngwaahịa kemịkal, ike, ngwaahịa ndị ahịa kwa ụbọchị Onyinye, akwa na akwa. , Akpụkpọ ụkwụ, ihe ndozi ụlọ, ọfịs, akpa na oge ezumike, nri, ọgwụ na nlekọta ahụike.
E kere ihe ngosi mbubata ụzọ isii, ya bụ: ngwa elektrọnik na ngwa ụlọ, akụrụngwa ụlọ na akụrụngwa, igwe na akụrụngwa, nri na ihe ọ beụ beụ, arịa ụlọ, akwa na akwa ụlọ.
4. The kpọmkwem ụdị nke Canton Fair ẹkenịmde online?
127th Canton Fair ga-eji teknụzụ ihe ọmụma dị elu iji gosipụta ikpo okwu ntanetị zuru oke n'ịntanetị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Canton Fair. Ndị na-eme ihe ngosi nke natara nhazi ụlọ a nke Canton Fair ga-egosipụta na ntanetị wee sonye na ntanetị dịka mpaghara ihe ngosi ahụ. Ikpo okwu na-enye nkwalite ihu igwe na ihu igwe niile, ntinye na ịzụta ihe, mkparịta ụka n'ịntanetị na ọrụ ndị ọzọ, ọkachasị gụnyere ngalaba atọ dị mkpa:
(1) Ngosipụta na ntanetị na ikpo okwu: Nke mbụ, ụlọ ọrụ nwere ike bulite ụlọ ọrụ nke ha na ozi ngwaahịa dị ka eserese, vidiyo, 3D, VR na usoro ndị ọzọ iji gosipụta n'ọtụtụ ụdị, ọtụtụ akụkụ, na mma; Nke abụọ bụ na dị ka data nke ndokwa ụlọ ọrụ nke Canton Fair dị ugbu a, ụlọ ọrụ nwere ike bulite ụlọ ndozi ọfụma iji kwado ngosipụta ụzọ atọ nke onyonyo na ntọhapụ nke ngwaahịa;
Nke atọ bụ iwusi ike na melite ọrụ njụ-ajụjụ ọchụchọ. Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịjụ ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ site na ngosipụta nkewa, ngwaahịa na isiokwu ụlọ ọrụ, nọmba ụlọ ahịa, wdg, wee gaa ụlọ ọrụ mebere ụlọ ọrụ.
(2) Ahịa mgbasa ozi ndụ: mepụta ogidi na ntanetị na ntanetị na ntanetị, ma setịpụ ụlọ mgbasa ozi ntanetị na ntanetị 10 × 24 maka ụlọ ọrụ ọ bụla iche. Amaghị ụlọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na oge na ohere. Ndi ụlọ ọrụ nwere ike ịme mkparịta ụka ihu na ihu na ndị ahịa na ntanetị. O nwekwara ike ịkwalite ma kwalite ọnụ ọgụgụ ndị ahịa n'otu oge site na ntanetị, ma nye ọrụ dịka nleghachi anya na ọchịchọ, ibudata vidiyo, nkwukọrịta mmekọrịta, na ịkekọrịta, nke na-enye ndị ụlọ ọrụ nnwere onwe iji mepụta azụmahịa na mkparịta ụka nkwukọrịta. .
(3) Suppnye na ịzụta nkwụsị: ikpo okwu na-akwado ndị na-eme ihe ngosi na ndị na-azụ ahịa ka ha bipụta ọkọnọ ma chọọ ozi, wusie ike n'ịntanetị, ma nye ihe ọmụma zuru oke maka ndị ahịa abụọ ahụ, gụnyere ọnọdụ nke ndị na-azụ ahịa, aha ndebanye aha, ndị ngosi gara aga Ikere òkè, ma ọ bụ ụlọ ọrụ Canton Fair Brand, wdg, detuo ntanetị gburugburu mkparịta ụka azụmaahịa nke ngosi anụ ahụ. Iji kwanyere ma kwanye nzuzo na ahia nke B2B, ndi ozo nwere ike ịhọrọ ngwa ndi ozo iji duzie mkparita uka miri emi ma guzobe iwu. Ikpo okwu a na-enyekwa ụfọdụ mkparịta ụka vidiyo na njikọta ngwanrọ mmekọrịta iji kwado ojiji nke abụọ. Ibe ikpo okwu na-enye nkwado nsụgharị asụsụ dị iche iche iji kwado nkwurịta okwu n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị ngosi.
(4) Mmekọrịta mmekorita nke nyiwe nke atọ: nke 127th Canton Fair ga-edozi mpaghara ule-e-commerce zuru oke; n'otu oge ahụ, a ga-enwe ụfọdụ nyiwe e-commerce ndị ọzọ gafere n'ụlọ nwere isiokwu bụ "Synchronous Canton Fair, Global Business Opportunities" Soro na-arụ ọrụ mmemme e-commerce nke atọ na ntọala afọ ofufo.
5. Kedu esi abanye na ntanetị ngosi ihe ntanetị?
Ihe dị ka ụlọ ọrụ ngosi ihe mbupụ 25,000 nke ụlọ ntu nke 127th Canton Fair guzobere yana ihe dị ka ụlọ ọrụ ngosi mbubata 400 nwere ike ịbanye na ngosipụta ngosipụta site na iji nọmba akaụntụ nke usoro Easyjet mbụ ahụ, ndị ọrụ ndị ọzọ enweghị ike ịbanye.
Ndị na-azụ ahịa na ndị ọbịa n'ụlọ na mba ofesi nwere ike tinye usoro ngosi ihe ntanetị n'ịntanetị site na webụsaịtị gọọmentị nke Canton Fair, wdg. ụlọ (ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ esetịpụ mgbochi ndị ọbịa chọrọ itinye akwụkwọ na ụlọ ọrụ ahụ iji nweta koodu ịkpọ òkù ịbanye) na arụmọrụ ngosi ntanetị ndị ọzọ.
Previous: Ugboro ole ka taya ụgbọ ala na-agbanwe?
Ọzọ: Mụtakwuo banyere taya